अझै २०–२५ वर्ष ढुक्कका साथ काम गर्छु : प्रधानमन्त्री - Jagaran Post
Home/व्यक्ति बिशेष/अझै २०–२५ वर्ष ढुक्कका साथ काम गर्छु : प्रधानमन्त्री
अझै २०–२५ वर्ष ढुक्कका साथ काम गर्छु : प्रधानमन्त्री
२०७६ फाल्गुन १५, बिहीबार १८:४८ गते
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिट्टै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बताएका छन् । पार्टीको वाग्मती प्रदेश कमिटीले काठमाडौैंमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले केही दिनभित्रै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बताएका हुन् ।
१२ वर्षअघि भारतको नयाँ दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले केही दिनअघि सम्पादकहरूकोसँगको भेटमा पनि निकट भविष्यमै पुनः प्रत्यारोपण गर्ने र २०–२५ वर्ष ढुक्कका साथ काम गर्ने बताएका थिए ।
त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदै ओलीले प्रशिक्षण कार्यक्रममा भने, “म छिट्टै किड्नी फेर्दैछु । किड्नी फेरेपछि १५ वर्ष ढुक्कले काम गर्न सक्छु ।”
उनले स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि खुलासा गरे ।
“किड्नी फेर्छु । पाँचदिन अस्पताल बस्छु । छैटौं दिनदेखि काम गर्छु । को बिरामी हुँदैन र ! म पनि अलिअलि बिरामी हुन्छु । बिरामी भएका बेला पनि काम गर्ने बानी परेको छ,” उनले भने ।
उनले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भनेर दाबी प्रस्तुत गर्न छुटाएनन् । काठमाडौंका बाटा हेरेर पनि त्यो थाहा हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।
पार्टीभित्र मतभेद खोज्दा विनाशको बाटोतिर अग्रसर हुने ओलीको ठोकुवा थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभिन्न कालखण्डमा वैचारिक बहस सुरु गर्दा त्यसले विभाजनको बाटो लिएको उनले बताए ।
“बहस गर्दा स-साना चौका, कसैलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पत्नीलाई महिला विभाग प्रमुख, छोरालाई युवा संगठनको जिम्मेवारी मिल्यो होला तर देशले के पायो त ? वैचारिक शुद्धताको नामको सङ्घर्षले देशलाई के दियो ?” उनको प्रश्न थियो ।
उनले नेकपाले भुलचुकले दुई तिहाइ सन्निकट मत प्राप्त नगरेको बताउँदै सदुपयोग गरिने बताए । तालुका रौं त्यसै नझरेको बताउँदै सङ्घर्ष गर्दागर्दै र देशका लागि केही गरुँ भनेर मिहिनेत गर्दा नै आफू बिरामी परेको बताए ।
बर्षा राउतले माफी माग्दै भनिन : अब बोल्दा हेक्का राख्छु
२०७७ जेष्ठ ११, आईतवार १५:३६ गते
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन : ‘हामी स्वाधीन र स्वतन्त्र छौं, कोही कसैसँग झुक्दैनौं’
२०७७ जेष्ठ ९, शुक्रबार ०७:४७ गते
मोदिको सपथको लागि नेपाललाई पनि निम्तो, प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने
२०७६ जेष्ठ १३, सोमबार १७:०८ गते
ओली उवाच: साहस र प्रेरणा कि स्रोत शेर्पा !
२०७६ बैशाख १०, मंगलवार १०:१८ गते
सामाजिक अभियन्ताको आवरणमा सावित्री सुवेदीको कालोधन्दाको नालीवेली
२०७५ फाल्गुन २४, शुक्रबार १३:०० गते
जीवन र जगतको बारेमा बुझ्न गीताको अध्ययन गरौं
२०७७ जेष्ठ १४, बुधबार ०१:०८ गते
Breaking – ललितपुरमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु,
२०७७ जेष्ठ १४, बुधबार २२:१५ गते
आन्तरिक उडान खुलाऊने तयारी, पिसिआर र र्यापिड टेस्टको प्रमाणपत्र भने अनिवार्य
२०७७ जेष्ठ १४, बुधबार १४:५५ गते
कपिलवस्तुमा आज (शनिबार) थप ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १६:२० गते
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार संक्रमित थपिए
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १६:१५ गते
विश्व स्वास्थ्य संगठनसंग सबैप्रकारको सम्बन्ध तोडेको ट्रम्पको घोषणा
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १४:३८ गते
दैलेखमा थप १४ जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिए
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १२:०२ गते
कृष्णनगर नाकामा आएर अलपत्र परेका नागरिकको उद्वार
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार ०९:२८ गते
ट्रम्पद्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार ०९:१४ गते